Mba tsy handalo fotsiny ny hoe Krismasy… | NewsMada
Mba tsy handalo fotsiny ny hoe Krismasy…
Par Taratra sur 24/12/2018
Tonga olombelona ny zanak’Andriamanitra hahatonga zanak’Andriamanitra ny olombelona. Mby ao an-tsaina hatrany izay amin’izao Krismasy izao: fahatsiarovana ny nahaterahan’i Kristy, Tompo sy Mpamonjy. Mpamonjy no teraka ho antsika, araka ny finoana kristianina: tonga hitory ny Vaovao mahafaly na ny Filazantsara, nanolo-tena hisolo voina ny zanak’olombelona teraka tao amin’ny ota, nandresy ny fahafatesana, hitondra famonjena sy fiainana mandrakizay…
Araka izany, tsy tokony handalo fotsiny ny Krismasy: fisaintsainana, fakana bahana, fiaingana vaovao… Ahoana na aiza ho aiza ny fiainam-panahy? Mitondra inona izao Krismasy izao eo amin’ny tena, na ny tokantrano, na ny fiarahamonina, na ny firenena… Eny, na ho an’ny tsy kristianina aza: amin’ny lafiny iray, efa zary fanaovana hetsika sy fetin’izao tontolo izao aza ny hoe Krismasy ho an’ny sasany. Fanararaotana amin’ny fitadiavana, fialan-tsasatra, fanaovan-danonana…?
Mba tonga inona na aiza ho aiza, hono, isika amin’izao Krismasy izao? Eo, ohatra, ny toe-draharaha mila fitandremana sy fahamailoana fatratra lalovan’ny firenena izao. Mba mila fitoniana sy filaminana tanteraka kosa ny vahoaka ifotony; eny, na eo aza ny fahasahiranana efa ho lava. Zava-dehibe izay fitsaharana anaty izay ho an’ny tsirairay, ialàna amin’ny karazana enta-mavesatra sy ny zioga rehetra. Mba tena hisy tsirony sy dikany ny hoe miaina sy ny fiaraha-miaina.
Raha mba misy tafatoetra sy lalim-paka ihany izay entin’ny hoe Krismasy izao izay, farafaharatsiny ahay, mba misy fiovana sy fanovana: eo amin’ny fomba fiaina sy fomba fiasa, ohatra, ny fiaraha-miaina, ny fiatrehana ny hoavy amin’izay… Tsy dodoria tsy misy famavany tsinona ny fiainana, mila fivoarana. Mitaky fandinihan-tena izany, fanapahan-kevitra, hetsika, firosoana… Tsy fotoan’izany izao? Te ho tonga inona na ho aiza marina isika? Alao hery…